နတ်မောက် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးစာသင်ကျောင်းသို့ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြ သည့် မှတ်တမ်း
BFI မိသားစုမှ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၉ရက်နေ့ ၂၀၁၉ တွင် နတ်မောက် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးစာသင်ကျောင်းအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား စသည့် အခြေခံစားသောက်ကုန်များနှင့် ဗလာစာအုပ်၊ ဘောပင် စသည့် အခြေခံစာရေးကိရိယာ ပစ္စည်းများအား ၇ရက်သားသမီးများအား ရည်စူး၍ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြစဉ်။
မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူအနေနဲ့ မိမိကလေးရဲ့ စာသင်ကြားရေး အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်
ကျောင်းနေစ ကလေးငယ်တွေအတွက် စာမေးပွဲဆိုတာဟာ ကြောက်စရာကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ . . .
မိမိရင်သွေးရဲ့ မနက်စာဟာ သင့်တော်ရုံဖြစ်နေရပါမယ်
မနက်စာကျွေးတဲ့အခါမှာ ပြည့်အင့်နေအောင်ကျွေးဖို့ မသင့်သလို မနက်စာကို Skip လုပ်တာ ပိုပြီးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ကလေးအရွယ်မှာ သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ မနက်စာကို စားတဲ့ကလေးတွေဟာ . . .
အုပ်ထိန်းသူ၊ မိဘ ဖြစ်သူဟာ မိမိရင်သွေး တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းကို မကြာခဏ သွားရောက်သင့်တဲ့အပြင် ကျောင်းက ဖွင့်ထားတဲ့ Website ကိုလည်း မကြာခဏ ကြည့်ပေးသင့်ပါတယ်
ကျောင်းကို မကြာခဏ လည်ပတ်ရင်း ကျောင်းရဲ့ အားကစားကွင်း အခြေအနေ၊ ကျောင်းရဲ့ဆေးပေးခန်းက ဘယ်လိုအနေအထား ရှိတယ် စတဲ့ ကျောင်းပုံစံကို သိတဲ့အခါ မိမိရင်သွေးနဲ့ ကျောင်းရဲ့တစ်နေ့တာအကြောင်း ပြန်ပြောတဲ့အခါ ပိုပြီးရင်းနှီးလွယ် နားလည်လွယ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် . . .
မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူဟာ မိမိရင်သွေးကို ကျောင်း (သို့) မူကြိုမှ ကိုယ်တိုင် သွားကြိုပေးတာမျိုး လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများဆီကနေ ကိုယ့်ကလေးငယ်ရဲ့ ဝါသနာအရင်းခံနဲ့ အမူအကျင့်တွေကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးမြန်းနိုင်သလို ကျောင်းမှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်း မိမိတို့ရင်သွေးငယ်တွေရဲ့ . . .
စာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ချိန်မှာ မမေ့သင့်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခါနီးအချိန်တွေမှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အနေနဲ့ စာတွေကျက်မှတ်တာက အဓိကဆိုပေမယ့် တခြားအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ စာမေးပွဲကို နောက်မကျဖို့ ကိုယ်စာကြည့်တဲ့ စားပွဲပေါ်မှာ ကိုယ့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ စာအုပ်နဲ့ စာရေးကိရိယာတွေပဲ ထားထားဖို့စတဲ့ အရာတွေလည်းပါပါတယ်။ ခုဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကတော့ စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ချိန်မှာ မမေ့သင့်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်မို့ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေအတွက် အထောက်အကူလည်း ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . . .
စာလေ့လာကျက်မှတ်တဲ့အခါမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အစားအသောက် ၁၀ မျိုး
စာတွေကျက်၊ Noteတွေဖတ်၊ စာပြန်နွေးတာတွေ လုပ်ရတာဟာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် ဦးနှောက်ကို အလုပ်တွေ လုပ်ခိုင်းသလို အားပြန်ဖြည့်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ ဒါမှသာ စာတွေလေ့လာတဲ့အခါ ပိုမိုအာရုံစိုးစိုက်နိုင်ပြီး သင်ခန်းစာတွေကို ပိုပြီးမှတ်မိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စာတွေ လေ့လာတဲ့အခါမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အစားအစာတချို့ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် . . .